A degharịa Akwụkwọ Onyinye Efu! | Martech Zone
Monday, April 23, 2007 Douglas Karr
Taa ka m natara Akwụkwọ Chris Baggott na ozi, woohoo!
Ya mere, lee ihe a! Zụta otu akwụkwọ Chris site na ịpị akwụkwọ a na post a, m ga-ewetakwa akwụkwọ ọzọ mara mma, Kiss Theory ọ dị mma, nye ndị mmadụ 3 mbụ zitere m njikọ nkwenye na ha zụrụ akwụkwọ ahụ. Akwụkwọ ndị ahụ bụ dezie by Bob Prosen onwe ya!
Obi dị m ụtọ maka akwụkwọ Chris maka ebumnuche ole na ole:
Ana m atụ anya ịgụ akwụkwọ a. Kemgbe ahụ, Chris nọ n’ụzọ ụlọ ọrụ ya ịmalite okwu na ịmụ site na Ndị na-ere ahịa Email na mbara ụwa. O doro anya na akwụkwọ ahụ ga-abụ naanị akwụkwọ kwesịrị ịgụ na Email Marketing!
Chris bụ enyi na onye ndụmọdụ. Ọ na-emeghe, na-eme ihe n'eziokwu, na-emekwa ihe mara mma. Mụ na Chris ghọrọ enyi ngwa ngwa mgbe m sonyeere ụlọ ọrụ ya na enwere m anya mmiri mgbe ọ hapụrụ maka mmalite ọhụụ ya (mana ọ maara na m na-aja ya mma!).
Anọ m n’akwụkwọ ahụ! E nwere nnukwu akụkụ dị na akwụkwọ gbasara akpaaka na njikọta nke Chris jụrụ Amol Dalvi na m na-enye nzaghachi na. Lelee ya… Echere m na anyị etinyela ụfọdụ ndụmọdụ dị ukwuu APIMa ọ bụ na-enweghị Email Marketing.
Enwekwara m mpempe akwụkwọ nke anọ Kiss Theory Good Bye maka Ogba, onye na-agụ blog a ogologo oge nke na-enweghị ike ịchọta otu akwụkwọ ebe o bi (ọ ga-abụ na mail na-esote izu, Eng!).
Special ekele Bob Prosen maka amara na-ezipụ autographed mbipụta nke akwụkwọ ya mgbe na-agụ nyocha m. Anọ m na-agagharị na akwụkwọ ya na-arụ ọrụ na ndị enyi! Ọ bụ akwụkwọ magburu onwe ya gbasara usoro ndu na njikwa nke ga-adabara nzukọ ọ bụla.
Kedu ihe kpatara US agaghị enwe ekele maka bọọlụ?
Daalụ Doug, na-atụ anya ịgụ ya.
Akwụkwọ akụkọ Randy Forbes
Anọ m. Ezitere m gị ozi m ma na-atụ anya igwu n'ime akwụkwọ ọhụrụ Chris, ọkachasị ọkwa ọhụrụ gị maka ngalaba ama ama.
Mgbe m gafere na oke ala, ụbọchị nke ọzọ enwere m ohere iji gụọ isi ole na ole nke Kiss Theory Goodbye, nke ahụ bụkwa akwụkwọ ọzọ magburu onwe ya.